महिलाको दाह्री जुँगा किन आउदैन ?कहिलै सोच्नु भको छ,जन्नुहोस यस्तो कुरा | Khabar Sadan खबर सदन
Home अन्य महिलाको दाह्री जुँगा किन आउदैन ?कहिलै सोच्नु भको छ,जन्नुहोस यस्तो कुरा
महिलाको दाह्री जुँगा किन आउदैन ?कहिलै सोच्नु भको छ,जन्नुहोस यस्तो कुरा
हामीले देखिआएको तथ्य हो, पुरूषहरूको दाह्री जुगाँ आएको हुन्छ यद्यपी महिलाहरूको हुदैन । तर पनि अपवादमा केही केही महिलाहरूको पनि दाह्री जुँगा आएको देखिन्छ । यसरी पुरूषमा दाह्री जुँगा आउने तर महिलामा नआउने कसरी हुन्छ त ?
मानिसको उमेर बढ्दै गएपछी कपाल वृद्धि हुने प्रकृयालाई लैङ्गिक ग्रन्थीले नियन्त्रण गर्न थाल्दछ । यो ग्रन्थीलाई एडरेनल ग्लाण्ड भनिन्छ । एडरेनल ग्लाण्डले केटाहरूमा र केटीहरूमा भिन्नाभिन्नै प्रकारको रस/हार्मोन पैदा गर्दछ । जसलाई क्रमशः पुरष हार्मोन – एन्ड्रोजिन र महिला हार्मोन – ओइस्ट्रोजिन भनिन्छ । एन्ड्रोजिनले दाह्री जुँगा र शरिरमा रौँ को विकास गर्न मद्दत गर्दछ । तर तालुको रौँ वृद्धिमा भने प्रतिकुल असर पार्दछ । ओइस्ट्रोजिनले तालुको कपाल बढाउन मद्दत गर्छ तर दाह्री जुँगा शरीरको रौं भने बढ्न दिदैन । यसैले स्त्री जातिमा दाह्री जुँगा आउदैन तर पुरूषहरूमा आउदछ ।
कमै महिला छन जस्को दाह्री जुँगा भएको हुन्छ।कोहि महिलामा एन्ड्रोजिन हार्मोन पनि हुन्छ, त्यसैले कोसैकोसैको दाह्री जुँगा भएको पाहिन्छ नत्र अरु महिलाकोमा हुदैन।
Previous articleअब एसईईको नतिजा कहिले प्रकाशन गर्ने भो कुन महिनामा?
Next articleयादव सुतिरहेकोबेला चिन्जानी नभको व्यक्तिद्वारा खुकुरी प्रहार